Ady amin’ny kolikoly : hotsarain’ny Pac amin’ity taona ity ireo raharaha 70 mahery - ewa.mg
Ady amin’ny kolikoly : hotsarain’ny Pac amin’ity taona ity ireo raharaha 70 mahery
News - Ady amin’ny kolikoly : hotsarain’ny Pac amin’ity taona ity ireo raharaha 70 mahery
“70 mahery ny antontan-taratasin’ady efa vonona hotsaraina momba ireo ady heloka bevava ireo. Hiezaka izahay ho voatsara avokoa ireo raharaha nentina eto amin’ny Pac.”
Izay ny fanambaran’ny tonia mpampanoa lalàna ambony eo anivon’ny fitsarana misahana ny raharahana kolikoly (Pac), Antananarivo, Razafindrakoto Solofohery, teny 67 ha, afakomaly, momba ireo raharaha ady heloka bevava voarain’io rafi-pitsarana io hatramin’izao ary kendrena hovitaina amin’ity taona ity.
Andiana fitsarana valo ny hataon’ny Pac amin’izay fitsarana ady heloka bevava izay.
Nanomboka ny fiandohan’ny herinandro, ny 19 aogositra, hatramin’ny 27 aogositra ny andiany voalohany: miisa 13 nyantontan-taratadin’ady tsaraina amin’izany, misy voampanga 38. Manomboka amin’ny volana septambra kosa ny andiany roa. Toy izay koa amin’ny oktobra izay misy andiany roa, ary ny novambra sy ny desambra, misy andiany roa avy.
Maro ireo karazana heloka bevava hitsaraina
Anisan’ny tsaraina amin’izany ny raharaha fanodinkodinam-bolam-panjakana, ny famotsiam-bola, ny fanaovana kolikoly, ny fanaovana hosoka sy ny fampiasana hosoka, ny fanondranana zava-mahadomelina, ny fanondranana olona, ny fanamparam-pahefana, ny fisandohana andraikitra… Mety hahatafiditra am-ponja dimy ka hatramin’ny 20 taona sazy an-terivozona ireo heloka bevava ireo, miampy tsy fahazoana mandia faritra mandritra ny dimy taona.
Tsy misy sazy mihantona na fanalefahan-tsazy ny didy avoakan’ny Pac. Na izany aza, misy fiarovana avy amin’ny fanjakana an’ireo voampanga. Nahatratra aoriana ny fanombohan’ny fiasan’ny Pac hatramin’izay ny fifidianana ireo mpitsara mpanampy.
L’article Ady amin’ny kolikoly : hotsarain’ny Pac amin’ity taona ity ireo raharaha 70 mahery a été récupéré chez Newsmada.
Nivoaka tamin'ny : 21/08/2019
Nirefotra ny basy, ny asabotsy teo tao amin’ny kizon’i Soarano (toerana fieren’ireo dahalo) nandritra ny fisamborana ireo dahalo tompon’antoka tamin’ny fakana an-keriny zandary roa sy sivily telo nandritra ny halatra omby tao Ampandrabe, kaominina ambanivohitr’Ankilizato. Araka ny fampitam-baovao avy amin’ny zandary, notapohin’izy ireo tampoka ity kizo fieren’ny dahalo ity. Dahalo efatra no tratran’ny zandary tao an-toerana tamin’io fotoana io ka ny iray amin’izy ireo no nitifitra, saingy noho ny fahaiza-manaon’ny zandary dia maty tsy tra-drano ny iray, ny iray hafa kosa azo sambo-belona fa ny roa tafaporitsaka nandritra ny fifanjevoana. Tratra koa ny zokiolona roa mpampiantrano sady mikarakara ny fanovana ny anaran’ireo dahalo voasambotra. Tsiahivina fa nitrangana halatra omby tao Ampandrabe, ny 27 novambra 2017 izay nataona andian-dahalo maromaro ka nanao vonjy taitra ny borigadin’ny zandary ao Ankilizato. Tratran’ny be no ho ny vitsy anefa izy ireo ka lasa takalon’aina ny zandary roa lahy niampy sivily telo avy amin’ireo fokonolona mpanara-dia ary tsy votsotra raha tsy nandoavana vola 7 tapitrisa Ar, araka ny fanazavan’ny zandary hatrany. Telo andro taorian’io, nahazo loharanom-baovao ny zandary avy any Morondava sy ny FIGN ka olona miisa 21 indray voasambotra tao amin’ny fokontany Soarano sy Malaimbandy. Olona miisa 14 indray naiditra am-ponja.Jean ClaudeL’article Kizon’i Soarano: tratra ireo dahalo naka an-keriny zandary roa sy sivily telo a été récupéré chez Newsmada.
Fanabeazana sy kolontsaina: vitsy ireo tetikasa ahitam-bokatra tsara
Anisan’ny firenena maro tetikasa indrindra i Madagasikara aty amin’ny kaontinantan’i Afrika. Tafiditra ao anatin’izany ny tontolon’ny fampandrosoana ny maha olona sy ny fanabeazana. Hatreto anefa, tsy mbola hita misongadina ihany ny vokatra tsara avy amin’ireny tetikasa ireny. Tafahitsoka ao anatin’ny fahantrana hatrany ny Malagasy. Anisan’ny antony miteraka izany, raha ny fandinihan’ny mpandalina sy ny mpahay momba ny fiarahamonina, ny tsy fifanarahan’ny olana sy ny vahaolana.Tsy mifanaraka velively amin’ny kolontsaina sy ny fomba amam-panao malagasy ny asa sasany tontosaina ao anatin’ireny tetikasa ireny. Miainga any amin’ny fanadihadiana ka hatrany amin’ny fanatanterahana, samy toa mitarika ahiahy ho an’ny Malagasy hany ka teren-ko masaka fotsiny ny zava-drehetra.Na ho rakotra tetika antapitrisa aza i Madagasikara manontolo, raha mbola tsy miainga amin’ny fanajana sy ny fanomezan-kasina ny kolontsaina sy ny fomba amam-panao malagasy izany, azo antoka fa handamoka hatrany. Amin’ny fomba ahoana moa, ohatra, ny hampahomby ny tetika hoenti-mampitia indray ny vaky boky ny zaza malagasy kanefa boky voasoratra amin’ny teny vahiny mitantara anganom-bazaha no ezahina aparitaka amin’ny alalana tetikasa? Fa nankaiza ry Ikotofetsy sy Imahaka, Imbahitrila, i Zanakantsaly, sns?HaRy RazafindrakotoL’article Fanabeazana sy kolontsaina: vitsy ireo tetikasa ahitam-bokatra tsara a été récupéré chez Newsmada.
Kitra – Fangatahana lalao firahalahiana: hifandona amin’i Luxembourg sy i Nizeria ny Barea
Betsaka ireo firenena mangataka hanao lalao firahalahiana amin’ny Barea de Madagascar, amin’izao fotoana izao. Misy ireo avy aty Afrika ary eo koa ireo any Eoropa ka anisan’izany i Luxembourg.Raha tsy misy ny fiovana, hiatrika lalao firahalahiana ny Barea de Madagascar, ny volana oktobra ho avy izao. Hatreto, marobe ireo firenena mangataka hikatroka amin’ny ekipam-pirenena malagasy. Anisan’ireny ry zareo Luxembourg. Raha tsiahivina, ekipa efa nikatroka tamin’ny Barea de Madagascar izy ireo, ny taona 2019, nialoha ny nandehanana tany Egypta ka nisaraka ady sahala, 3 sy 3, ny roa tonta, tamin’izany.Efa nitarika tamin’ny isa 3 no ho 1 ny Barea, tamin’io, ary tany amin’ny fanampim-potoana no nanasahalan’i Luxembourg ny isa. Eo ihany koa i Burkina Faso sy ny Voromaherin’i Nizeria. Ity farany izay efa resin’ny Barea, 2 no ho 0, tao amin’ny vondrona nisy azy ireo, tamin’ny “Can 2019”.Mety hisy lalao roa izany hataon’ny Barea, mialoha ny hiatrehana an’i Côte d’Ivoire, ny 9 novambra ho avy izao, eo amin’ny fiadian-toerana ho an’ny “Can 2021”. Hatreto, tsy mbola namaly ireo fangatahana ireo ny federasiona fa mbola hisy ny fifampiresahana amin’ny mpanazatra, i Nicolas Dupuis, izay mahafantatra ny fandaharam-potoany. Tsy mbola voafaritra, araka izany, ny firenena hanaovana io lalao firahalahiana io.Mbola olana ny kianja sy ny fikarakaranaAnkoatra izay, tsy maintsy jerena ny toerana hanaovana ny lalao izay mety ho ao Paris. Raha ny zava-misy ao Frantsa amin’izao fotoana izao anefa, tsy mandray olona avy amin’ireo firenena voalaza fa faritra mena amin’ny Covid-19 izy ireo.Mila vola ihany koa anefa ho saran-dalan’ireo mpilalaon’ny Barea, raha toa ka atao aty Afrika ny lalao. Mety fihaonana tsy azon’ny rehetra atrehina (à huis clos) mantsy io lalao firahalahiana io ka tsy hisy vola ho azo. Araka izany, mbola mila mitady mpanohana io lalao io ny firenena roa tonta, hoenti-manana ny fikarakarana rehetra. TompondakaL’article Kitra – Fangatahana lalao firahalahiana: hifandona amin’i Luxembourg sy i Nizeria ny Barea a été récupéré chez Newsmada.
Raharaha fonjan’Ambositra :: Hatolotra ny Fitsarana ilay vehivavy nitory an’ireo gadra nitsoaka
Hatolotra ny Fitsarana, eny Anosy, ny vehivavy iray voatondro ho nisoloky ny anaran’ny vadin’ ny Filohan’ny Repoblika, anio, raha tsy misy ny fiovana. Nitory olona telo naiditra am-ponja tany Ambositra, tamin’ny 29 jona lasa teo, izy. Avo lenta ity raharaha ity satria fampiasana ny anaran’ny fikambanana Fitia no nitorian’ireo gadra nitsoaka azy. Iretsy farany, izay mbola karohina, hatramin’ny omaly, taorian’ny fandosiran’izy ireo niaraka tamin’ny lehiben’ny fonjan’Ambositra sy ny mpandraharahan’ny fonja iray, nanomboka tamin’ny 2 jolay 2020. “Avo lenta ito raharaha ito”, hoy ireo mpanao famotorana eny amin’ny Sampana misahana ny heloka bevavan’ny Zandarimaria, eny Fiadanana, omaly. Izy ireo no naka an’itsy vehivavy torian’ireo gadra nitsoaka ho nisoloky tany Ambositra, tamin’ny herinandro lasa teo. Fantatra fa vola an’arivony tapitrisa ariary maro no mihodinkodina ao anatin’izao raharaha izao. Fisolokiana sy fanaovana hosoka ary fampiasana hosoka, niampy fisintonana an-tsokosoko ny vola fanao an-tratra tany amin’ ny banky (provision) no niampangan’ilay vehivavy an’iretsy olona telo ka niafara tamin’ny fampidirana am-ponja vonjimaika azy ireo, tany Ambositra. Misy mitonona ho mpanolotsaina eo anivon’ ny andrim-panjakana eto amin’ny firenena mihitsy aza amin’ireo voafonja tsy hita ireo. L’article Raharaha fonjan’Ambositra :: Hatolotra ny Fitsarana ilay vehivavy nitory an’ireo gadra nitsoaka est apparu en premier sur AoRaha.
Gadona maroloko – Don.FR : “Tsy laza ny tanjona fa ny hampita hafatra”
Rakotonarivo Jean Donné, mpihira fototra ao amin’ny tarika Don.FR sady tompon-kevitra amin’ny fananganana izany, ny taona 2017. Milaza ny heviny momba ny zavakanto sy ny mpanakanto ary ny akony.Tarika mampiray ny kanto malagasy manerana ny Nosy ny Don. FR… Mivoy ny karazan-kira mifangaro, izany hoe, manao ny gadona rehetra toy ny tsapiky, ny basesa, ny milamindamina sy ny maro hafa ny tarika. Noho ny fisian’ny mpikarakara, taty aoriana, nisy fiovana tanteraka ny tarika fa tsy toy ny nahitana sy nahalalana azy tany aloha. Na teo amin’ny lafiny hira izany na ny hevitry ny anaran’ny tarika. Talenta ny “Don” ary Fi­rai­sankina ranoray kosa ny “FR”. Ankoatra ny gadona voalaza ery aloha mantsy, mitambatra ho iray ao anatin’ny tarika ireo mpikambana 10 mianadahy avy amin’ny faritra. “Tsy laza ny tanjona ma­hamaika fa ny hampita hafatra ho an’ny rehetra, indrindra ny tanora. Hijanona ha­trany amin’ny fanaovana mozika maneho fananarana sy fitaizana ho an’ny fiarahamonina ny tarika fa tsy hanao hira mety hanafintohana ny hafa”, hoy i Jean Donné. Maro ny sanganasa mihodina eny anivon’ny serasera toy ny «Allo Tiako», ny «Tsin­jaka», ny «Maloto lamba», ny «Tsy mahavita tena», ny «Modia», ny «Ombay mitady», sns. Vao tsy ela akory izay ny namoahan’izy ireo ny hira: «Neny» sy ny «Zana­kao». Manomana seho miavaka eto an-dRenivohitra ny tarika amin’izao ary hisy rakipeo kononkononin-dry zareo amin’izany. Tsy vitsy ny mpanakanto malaza efa nampiara-peo tamin’i Don.FR toa an’i Bolo Pix sy i If Clark. Ankoa­tra ny rindran-tsary, efa nisy ny seho nataon-dry Don.FR tany Antsirabe sy tany amin’ny faritra hafa. «Manantena fiaraha-miasa hatrany aminareo mpankafy izahay ka raha misy ny tsy mety, aza misalasala manome fanamarihana fa raisinay hakana lesona izany fa tsy hitezerana akory», hoy ny mpikarakara ny tarika. Marihina fa tovolahy mpikabary ihany koa i Jean Donné ary efa betsaka ny kabary am-panambadiana efa nataony. Araka izany, afaka mivady tsara aminy ny kabary sy ny mozika fa tsy mifanitsaka akory.NarilalaL’article Gadona maroloko – Don.FR : “Tsy laza ny tanjona fa ny hampita hafatra” a été récupéré chez Newsmada.
Fametrahana fanjakana tsara tantana Natsinkafon’Imbiky Anaclet ny kolikoly ao amin’ny fitsarana
Nitondra famelabelarana momba ny paikady iadiana amin’ny kolikoly eny anivon’ny fitsarana, mifandray amin’ny Covid-19 sy ny toekarena, ny mpahay lalàna, Imbiky Anaclet, omaly tetsy Ampefiloha.Nambarany fa voa mafy isika tamin’iny valanaretina iny ka tsy maintsy mitady vahaolana sy fomba hanarenana indray ny toekarena sy ny fihariana. Nahitsy anefa ny tenany nilaza fa mitaky fepetra hentitra sy mafy izany iatrehana ny hampandehanana ny toekarena. Niaiky izy fa misy ny olana. “Miankina amin’ny fahatsaran’ny fitsarana ny fahombiazan’izany. Anisan’ny mahatonga ny toekarena marefo ny kolikoly… Firenena be kolikoly indrindra maneran-tany isika raha ny filaharana sy ny antontanisa. Anisan’ireo sampandraharaha telo na efatra voalohany be kolikoly ny fitsarana, raha ny tsapan-kevitra”, hoy izy.Tsy maintsy diovina ny fitsaranaNotsiahiviny fa efa maro ireo rafitra sy lalàna natao iadiana amin’ny kolikoly. Tsy maintsy diovina ny fitsarana hampandehanana indray ny fihariana sy ny toekarena.Etsy andaniny, nohitsiny koa fa betsaka loatra ny kabary etsy sy eroa manoloana ity ady iray ity. “Tsy misy ny fanatanterahana fa resabe, tsy arahina asa izany”, hoy ihany izy. Noderainy koa anefa ny fanjakana amin’ny fandaharanasany maneho fahavononana hiady amin’ny kolikoly.Famakiana bantsilana sy fanenjehanaTsy ampy anefa izany, araka ny nambarany hatrany. “Tsy tokony hiantehitra amin’izany fotsiny isika raha te hahita vahaolana mahafa-po fa ilaina koa ny fiarahamonim-pirenena. Tokony handray andraikitra izy ireo hampibaribary sy hamaky bantsilana ary hitory ireo mpanao kolikoly”, hoy ihany ity minisitra teo aloha ny Fitsarana ity. Noraisiny ho ohatra amin’izany ny fahitana ireo fananana harena sy ny fandaniana mihoa-pampana nefa tsy mifanaraka amin’ny vola raisiny. Tokony henjehina sy hanaovana fanadihadiana ireny. Ohatra, ireo tsy mandoa hetra, na fadin-tseranana, na ny kolikoly eny amin’ny tsenambaro-panjakana, araka ny nambarany.Synèse R.L’article Fametrahana fanjakana tsara tantana Natsinkafon’Imbiky Anaclet ny kolikoly ao amin’ny fitsarana a été récupéré chez Newsmada.
Nametraka laminasa mazava ny mpanjaka Mohamed VI any Maraoka, ho fanarenana ny toekarem-pirenena sy ho fiarovana ny sosialy noho ny Coronavirus. Manodidina ny 13 miliara dolara ny hiatrehana izany: antoka sahanin’ny fanjakana sy ny tahiry fampiasam-bola ho fampandrosoana fototra. Laharam-pahamehana ny fanarenana ny indostria, ny fanajariana ny sehatra tantanan’ny fanjakana, tahiry Mohamed VI ho fampiasam-bola. Ny fahitan’ny mpanjaka Mohamed VI any an-toerana ny fahasahiranan’ny mponina ny nahatonga azy nandray fepetra maro, indrindra ho fanarenana ny toekarena.Miara-tonga ny revolosiona indostrialy sy ny Corona­virus, manova zavatra betsaka eo amin’ny tontolon’ny asa, ny mpiasa sy ny mpampiasa. Manolo asa 85 tapitrisa mialoha ny 2025 ny fivoaran’ny teknolojia ankehitriny. Ampolo tapitrisa ny toeram-piasana voasolon’ny « robot ». Tsy araka ny niheverana azy fa ho haingana ny fandrosoan’ny fampiasana ireo fitaovana teknolojia samihafa noho ny fihanaky ny Covid-19, araka ny fanadihadiana isan-taona ataon’ny The Future of Jobs. Mivoatra haingana ankehitriny ny fampiasana milina any amin’ny toeram-piasana samihafa.Nihena 26,4 % ny fampiasam-bola ataon’ny vahiny any Tonozia nandritra ny sivy volana voalohany tamin’ ity taona ity, raha ampitahana ny tamin’ny 2019. Nihena avokoa ny seha-pamokarana rehetra any amin’ity firenena ity, avy amin’ny indostria vahiny sy ny tompon-tany. Anisan’ny tena misongadina ireo orinasa vahiny mpanodim-bokatra, ny sehatry ny fizahantany. Tojo fatiantoka avokoa ireo orinasa madinika sy salantsalany (PME) ka eo am-pamolavolana ny laminasa hanarenana izany izao ny governemanta tonizianina.Tsara toerana ny toekarena amerikanina maneran-tany ny taona 2012-2016, nitondran’ny filoha Barack Obama; mifanohitra tanteraka amin’izany ny fahitan’ny filoha Donald Trump azy. Koa nambaran’ny filoha ankehitriny ny mampiavaka azy: ady ara-barotra amin’i Sina, ny fampidinana hetra amin’ny ankapobeny, ny fanovana fomba fiasa amin’ny fiarovana ny tontolo iainana… Talohan’ny Covid-19, efa nanomana politika entiny mandritra ny fampielezan-kevitra i Donald Trump koa nomaniny ny lafiny toekarena, nambarany fa « tsara indrindra hatramin’izay ».L’article Eran-tany a été récupéré chez Newsmada.
Le By Pass- Afterwork: hitondra ny mozikany ny tarika Iraimbilanja
Mozika metaly… Tsy mety harafesin’ny fotoana ny fisian’izany tarika Iraimbilanja izany. Hitondra ny gadona mavesatra, etsy amin’ny Le By Pass, izy ireo, anio zoma 23 oktobra. Manomboka amin’ny 7 ora hariva ny lanonana. Hafampana, araka izany, ny faran’ny herinandro… Mpihira efa tsy zovina amin’ny maro intsony ny hitondra ny mozikany amin’io fotoana io, indrindra ny mpankafy rock. Mpanakanto anisan’ny nanamarika ny fahazazan’ny tanora, ankehitriny, izy ireto ary azo lazaina ho mpihira tsy lefy laza, nahatety vanim-potoana maro.Hovetsoina ao avokoa ireo hira nanamarika azy ireo teo amin’ny tontolon’ny mozika. Anisan’izany ny “Tao an-tsekoly”, ny “Tehina”, ny “Ikopa”, ny “Alitara” sy ny maro hafa tsy ampoizina. Marihina fa anisan’ireo toerana manome lanja ny mpanakanto malagasy sy ny kolontsaina malagasy ny Le By Pass, akaikin’ny sampanana Ambohijanaka, eo anelanelan’ny Le Jardin sy ny Elgeco Plus.Nomarihin’ny tomponandraikitra fa hajaina tanteraka ny fepetra rehetra ara-pahasalamana amin’ny seho sy korana tahaka izao tsy hampihanaka ny valanaretina Coronavirus.NarilalaL’article Le By Pass- Afterwork: hitondra ny mozikany ny tarika Iraimbilanja a été récupéré chez Newsmada.
Fisolokiana avolenta – Kaominina Toamasina: 20 tapitrisa Ar ny efa azony, karohina i Jidiajia
Zatra ny lalan-dririnina! Nandritra ny fitantanan’ny ben’ny Tanàna teo aloha ary notohizan’ny filohan’ny delegasiona manokana taorian’izay ny fahazaran-dratsin’ny mpiasa eo anivon’ny kaominina amin’ny fakana vola tsy hampidirina ao amin’ny kitapom-bolan’ny kaominina fa any am-paosy avy hatrany. Tsy asian’ny tompon’andraikitra resaka anefa izany fa vao mainka aza arovany ny mpiasa manao izany, araka ny fampitam-baovao voaray avy any Toamasina. Vokany, leon’ny fakana vola mihoa-pampana ataon’i Jidiajia ny mpivarotra ao Bazarikely sy Ankirihiry ka nitondra ny fitoriana teo anoloan’ny mpitandro filaminana. Raha ny fanadihadiana natao teo anivon’ny kaominina, fakam-bola hatramin’ny andron’ny ben’ny Tanàna Ratsiraka Elysée ny raharaha ary mbola tohizan’ity lehibena sampanasa iray eo anivon’ny sampandraharaha fahadiovana sy tontolo iainana eo anivon’ny kaominina ity. Ireo mpivarotra lamba tonta, voankazo, akoho amam-borona, telefaonina finday ireto voasolokiny ireto izay lazainy fa esorina eo ianareo fa omena toerana ka mandoa vola. Vokany, misy manome 3 ka hatramin’ny 5 tapitrisa Ar ireo mpivarotra. Teo koa ireo nandoa 5 tapitrisa Ar. Nilaza ny talen’ny eo anivon’ny sampandraharaha fahadiovana sy tontolo iainana fa aleo ianareo mpivarotra mitory any amin’ny mpitandro filaminana hahafahana manao ny fikarohana ity mpisoloky ity.Sajo sy J.C L’article Fisolokiana avolenta – Kaominina Toamasina: 20 tapitrisa Ar ny efa azony, karohina i Jidiajia a été récupéré chez Newsmada.